EFCC ga-azụgharị ụmụnwoke ndị na-eme wayo ịntanetị | odumblog
EFCC ga-azụgharị ụmụnwoke ndị na-eme wayo ịntanetị
Onuorah Jennifer11 months agoNo comment
posted on Oct. 18, 2019 at 6:39 am
Onye nnọchite anya onyeisi oche Economic Financial Crimes Commission, Mz. Ibrahim Magu, kwuru na otu ha nwere atụmatụ ịzụgharị ndị ntorobịa, ndị na-egwu ndị mmadu wayo ịntanetị, ndị a mara dịka Yahoo Yahoo.
Magu kwuru nke a na Lagos na Tọzde mgbe ọ na-enye nkuzi nke isiokwu ya bụ, ‘Strategic change administration and innovation to curb corruption in Nigeria’ na nzukọ ndị Chartered Institute of Administration.
O kwuru na ndị wayo ịntanetị ga-abara ụlọọrụ ha uru n’ọdịnihu.
Magu kwuru ndị EFCC na ndị ECOWAS na-arụkọta ọnụ iji ijide ndị na-eme mpụ n’obodo ndị ọzọ. Ya mere, onye ọ bụla buuru ego na Naijiria gawa Ghana, a ga-akpọ ndị otu ha nọ Ghana ka e jide ya bụ onye omekome.
Magu kwuru na ha ga-etinye ndị ọrụ ebe ọ dị ọtụtụ ka iji nye aka belata mpụ n’obodo a.
Ọ rịọrọ ndị CIA ka ha na ha rụkọta ọrụ iji belata mpụ na arụrụ n’ala.
Tags:EFCCInstitute of Chartered AdministrationInternet fraud
Onuorah Jennifer October 18, 2019
Reno Omokri enyerela onye ọkụ gbara ngwa ahịa ya n’Ọnitsha aka
Ndị ugwu egosila mmeghachiahụ maka mmanụ achọtara n’ala ha
Odum Blog7 days ago